I-VILLAGE enomtsalane e-Itacimirim
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguWilton
Yiza uzonwabele iintsuku zokuzola kwilali yethu entle nenomtsalane yaseCharme 08B, esiyihombise ngokukodwa !! I-Condominium yethu iphambi kolwandle, kufutshane kakhulu nezindlu zaselwandle kunye neendawo zokutyela. I-Itacimirim yi-50 km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseSalvador kunye neekhilomitha ezi-5 ukusuka ePraia do Forte.
Indawo yokuqubha yekhondom iyamangalisa!
IVillage de Charme 08B yindlu ekumgangatho ophantsi, inamagumbi ama-2 anesimo somoya, igumbi lokuhlala, ikhitshi, ibalcony kunye nendawo yenkonzo. Indawo ehonjiswe kakuhle kwaye ixhotyiswe. Uluntu olugayiweyo, olunendawo yokuzonwabisa, indawo yokuqubha yabantu abadala nabantwana, iibarbecues ezimbini, umatshini womkhenkce kunye nebala lokudlala. Iindawo zokupaka ezi-2 kunye nokhuseleko lweyure ezingama-24. Amagumbi okuhlambela kwii-suites ezineshawa yombane.
I-Praia da Espera yenye yeelwandle ezilungileyo kakhulu e-Itacimirim, indawo ezolileyo yokuqubha, amachibi endalo enziwa kumaza aphantsi. Indawo enoxolo kakhulu kwaye ephumla.
Umbuki zindwendwe ngu- Wilton
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Itacimirim Beach